Umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali-YTpals
Sinikezela ngeempahla ezingabonakaliyo ezingenakubakho. Njengomthengi, unoxanduva lokukuqonda oku xa uthenga nayiphi na imveliso / inkonzo kwindawo yethu.
Nxibelelana nenkxaso yomthengi
I-99% yeengxaki inokuconjululwa nge-imeyile elula. Sicela ukuba ufikelele kuthi usebenzisa ezethu Qhagamshelana nathi iphepha. Icandelo lethu leNkonzo yabaThengi liya kubuyela kuwe ngaphakathi kwe-24-72 (ihlala ingaphantsi kweeyure ze-24) ngoqwalaselo lwexhala lakho kunye nesisombululo.
Izicelo zokuBuyisa ezifanelekileyo
● Ukungahanjiswa kwemveliso / inkonzo:
Ngamanye amaxesha amaxesha enkqubo ahamba kancinci, kwaye kuthatha ixesha elincinci ukuba iodolo yakho igqibe. Kule meko, sincoma ukuqhakamshelana nathi ukuba ufuna uncedo. Amabango entlawulo yokungangeniswa kweenkonzo kufuneka angeniswe kwiCandelo leeNkonzo zaBaxumi ngokubhaliweyo kwiintsuku ze-7 ukusuka ekubekeni iodolo.
● Imveliso ayichazwa-njengokuba ichaziwe:
Imiba enjalo kufuneka ixelwe kwiSebe lethu leNkonzo yaBathengi zingaphelanga iintsuku ezisi-7 ukusuka kumhla wokuthengwa. Makunikwe ubungqina obucacileyo bokuba imveliso / inkonzo ethengiweyo ayikho njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi. Izikhalazo ezisekwe kulindelo olungelulo lomthengi okanye iminqweno yakhe azizukiswanga.
● Umgaqo-nkqubo wokurhoxisa umrhumo:
Xa uthenga i-Enterprise, i-Elite okanye i-Celebrity subscription, uza kuhlawulwa ngokuzenzekelayo ngosuku olufanayo lwenyanga nganye. Ukuba ngaxa lithile awusadingi ukubhaliswa kweYTpals, sithumele umyalezo nge Qhagamshelana nathi iphepha kwaye siza kuseta iakhawunti yakho ukuba iphelelwe yisiphelo ekupheleni kwenyanga yakho yokubhalisa. Wamkelekile ukucima ubhaliso lwakho nangaliphi na ixesha. Ukuba, umzekelo, ubhalisile ngoSeptemba 23rd, kodwa usibhalele malunga nokuphelisa iakhawunti yakho kwiiveki ezimbalwa emva kwe-Okthobha ye-10th, siza kuseta iakhawunti yakho ukuba siyirhoxise ngo-Okthobha i-23rd, leyo iya kuba sisiphelo sokubhaliswa kwenyanga yakho. Ukuba ukhetha ukurhoxiswa kwangoko, sazise nje kwaye nathi singakwenzela oko. Awunyanzelekanga ukuba uhlale ubhalisile nangaliphi na ixesha, kodwa kuya kufuneka usibhalele xa sele ukulungele ukurhoxisa. Siya kuthi ke siwuphathe sithumele umyalezo wokungqina.
● Umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali:
Ukuba uthenga isicwangciso sokurhuma kwaye awonwabanga ngenkonzo ngaso nasiphi na isizathu, nceda uqhagamshelane nathi kwiintsuku ze-7 zomhla wakho wokurhuma kwaye siya kubuyisela ngokupheleleyo kwaye urhoxise ukubhalisa kwakho. Ukuba unxibelelana nathi ngaphezulu kweentsuku ze-7 emva kokuba intlawulo yakho ihlawulwe kwaye ucele ukubuyiselwa imali, iqela lethu liya kuyiphinda i-akhawunti yakho kwaye ukuba sibona kufanelekile, siya kuyibuyisela i-oda yakho ngokupheleleyo. Iintsuku ze-7 ezidlulileyo, awunalungelo lokubuyiselwa imali.
Simi ngasemva kweemveliso zethu kwaye siyazingcolisa ngokuhambisa ezona zibonelelo ziphezulu zeendaba zokunxibelelana nabantu kwezasekhaya online. Asinakuhlala sinikezela ngembuyiselo yemali, kodwa ukuba ngaphakathi kweentsuku ze-7 awonwabanga nge-oda yakho ngokulula Qhagamshelana nathi kwaye siya kufumana isisombululo kwiinkxalabo zakho.